Memory loss သတိမေ့ခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
1. လူငယ်တွေမှာပါဖြစ်တတ်ပါသလားဆရာ။ ကျွန်တော်လည်း အခုနောက်ပိုင်း တော်တော် မေ့တတ်လာလို့ပါဆရာ။
2. ဦးပဉ္စင်းက သက်တော် ၅၃၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေးရော စိတ်ကျန်းမာရေးပါ ဂရုစိုက်ပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အားကိုးရာကတော့ ဘာဝနာပေါ့။ သို့သော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းမှာ နာမည်တွေကို မေ့လာတယ်။ မေ့တာကလည်း ထူးဆန်းပါတယ်။ နာမည်ကိုမှ ရွေးမေ့တတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် တစ်ခါကဆို ဒကာတစ်ယောက်နဲ့ တရားစကားပြောနေရင်း ဝေဿန္တရာ နာမည်ကို မေ့သွားလို့ အခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်သုံးရက်လောက်မှ ပြန်စဉ်းစားလို့ ရပါတယ်။ အဲဒါ ဒီခေတ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါနဲ့များ ဆက်စပ်မှု ရှိပါသလား။ ဆက်စပ်မှု ရှိမယ်ဆိုရင် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်လေးတွေ ပြန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်။
သတိမေ့တာနဲ့အတူ Concentration အာရုံစိုက်မှုပါ အားနည်းတတ်တယ်။ Depression စိတ်ကျတာရှိရင် အဲလိုဖြစ်မယ်။ Brain areas ဦးနှောက်ထဲက ပျက်စီးတဲ့နေရာမတူရင် ခံစားရမှာမတူးဘူး။ အကုန်မေ့တာ မဟုတ်ဘဲ အဖြစ်အပျက် အမျိုးအစား သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိုသာ မေ့တာလဲရှိတယ်။ Mental or thinking abilities စဉ်းစားတဲ့ အစွမ်းက ဆက်ရှိနေနိုင်တယ်။ မရှိတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသေးစိတ် မမှတ်မိတာတဲ့ အစီအစဉ်လွဲနေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ စကားလုံးတွေ မေ့တာမျိုးလဲရှိမယ်။ ကြွက်သားတွေ လှုတ်ရှားရမှာမျိုးကို မေ့နေတာလဲရှိမယ်။